काठमाडौंको किंग्स् कलेजले विद्यार्थीहरूमार्फत सामाजिक सन्देश प्रवाह गर्ने उदेश्यका साथ शिल्पी थियटरमा ‘त्रयम्’ शिर्षकको नाटक मञ्चन गरिरहेको छ ।
यसै महिनाको २० गतेदेखि प्रदर्शनीमा रहेको उक्त नाटक विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा सामाजिक तथा लैंगिक विषयमा रुची एवं चासो राख्ने सबैका लागि सान्दर्भिक रहेको कलेजले बताएको छ ।
कलेजका विद्यार्थीहरूद्वारा मञ्चीत यस नाटकले आलंकारीकरुपमा भूत, वर्तमान र भविष्यका साथसाथै बिहानी, दिवा र साँझगरी तीन–तीनवटै चरणलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी महिलाको आवाजलाई उजागर गरेको छ । हाल नेपालमा महिलाको अवस्था र सोमा परिवर्तन ल्याउन उनीहरूको अपेक्षित प्रतिनीधित्वलाई नाटकले खास जोड दिएको छ ।
व्यवसायिक नाट्य कलाकार एवं निर्देशक दिलिप रानाभाटले निर्देशन गरेको यस नाटकमार्फत व्यापार एवं उद्यमशिलताको शिक्षामा श्रृजनशिलता, साहित्य तथा नवीनताका अवयवहरूलाई कसरी मिश्रण गर्न सकिन्छ भनेर प्रयोगात्मक ढंगबाट परीक्षण गर्नको लागि यस अवधारणालाई अगाडी सारिएको नाटक संयोजक दीक्षित भट्ट बताउँछन् ।
त्यसो त कलेजले यसै वर्षदेखि संचालनमा ल्याएको बिबिए इन अप्लाईड आर्टस् एण्ड डिजाइन कार्यक्रमको प्रयोगात्मक हिस्साको रुपमा समेत यस नाटक प्रदर्शनीलाई लिन सकिने जनाइएको छ ।
कलेजका प्रधानाध्यापक नरोत्तम अर्यालले हालसम्म व्यापार शिक्षाको क्षेत्रमा मानविय–मूल्य मान्यतालाई नकार्ने परिप्रेक्षमा विद्यार्थीहरूलाई ब्यापारब्यवसायमा कला, साहित्य, श्रृजनशिलता तथा नविनताकाका साथसाथै मानविय भावनालाई संलग्न गराइ ब्यवसायिक जिवन सफल बनाउन सिकाउने उदेश्य राखी बिबिए इन अप्लाईड आर्ट एण्ड डिजाइन कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको बताए ।
“हामीले सुरुमा यसै नाटकलाई मोड्युलको रुपमा बिबिए इन अप्लाईड आर्ट एण्ड डिजाइनका विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गरायांै र सोपश्चात सोही नाटकको मञ्चन गराइ विद्यार्थीहरूमा कलाप्रति अभिरुची जगाउने प्रयास गरेका छाैं,” प्राद्यानाध्यापक अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यसोत हाल रुची एवं शौखको रुपमा मात्र सिमित कलाको क्षेत्रलाई व्यवसायिक दिशा दिन पनि यस पहलले योगदान गर्ने उनले विश्वास ब्यक्त गरे ।
भोली (जेष्ठ २६ गते) अन्तिम प्रदर्शनी हुने यस नाटकलाई हालसम्म करिब ५०० जनाभन्दा बढी दर्शकहरूले हेरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा ४ प्रतिवेदन पेश
साहित्यकार रेणुका पन्थीको ‘प्यारो नेपाल’ नामक खण्डकाव्य विमोचित भएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डा देवी नेपाल, समालोचक प्रा डा रामप्रसाद ज्ञवाली र वाल्मीकि विद्यापीठका प्राचार्य प्रा डा भाग...
मुटु पो दिइस्, कलेजो त दिएको छैनस् ! [गजल]
गजल–१ झरी झरी नभन् एक्दिन त्यही पानीले मार्छ जोगाउन सकिनस् भने आफ्नै जवानीले मार्छ मुटु पो दिईस् कलेजो त दिएको छैनस् नि ? मदिरा-मदिरा नभन् ,साला पिउ...
अच्युत मान सिंह प्रधान 'उत्सुक' नफालौं जथाभावी फोहर यत्रतत्र फालौं कुनै तोकिएको निश्चित स्थानमा मात्र । फोहरलाई छुट्याऔं घरमै दुई किसिमले राखौं एक ठाउँम...
नारी साहित्य प्रतिष्ठान नेपालद्वारा प्रदान गरिने ‘गोमा स्मृति सम्मान’ यस वर्षका लागि साहित्यकार डा बेञ्जु शर्मालाई प्रदान गरिएको छ । नारी साहित्य प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवका अवसरमा सो प्रतिष्ठानद्वारा श...